Iindaba -I-Yuancheng eyomeleleyo: Yiza kwakhona
Yomelele Yuancheng: Yiza kwakhona
Ngo-Okthobha u-15, i-126th Canton Fair yaqala ngokwesicwangciso. I-Yuancheng Auto Accessories yoMvelisi we-CO., LTD ivele ngenkangeleko entsha kraca kulungelelwaniso lwemveliso yenoveli.
Umbala ogqwesileyo otshintsha umthunzi welanga kunye noluhlu lweevili zokuqhuba, abathengisi abathengisayo bakudala beemoto zelanga, uthotho lwefriji yemoto, uthotho lwentente yophahla, njl.njl.
Ukungena kwidokodo laseYuancheng, uya kubona indawo yemveliso yangaphandle apho kubekwe khona iifriji zemoto yenoveli. Emnyango kukho imodeli yentente ezenzekelayo etsala iindwendwe. Yintoni ecaleni kwendawo yemveliso yangaphandle yindawo yemveliso yangaphakathi yemoto. Abathengisi abaliqela babonisa imisebenzi yabathengi yeemveliso.
Kwinqanaba loku-1, iindwendwe zikuxabise kakhulu ukusebenza okuphezulu kunye nokuthembeka kweYuancheng imoto efrijini. Iimveliso zangaphakathi ezinje ngelanga kunye nekhava yevili lokuqhuba zenziwe ngelaphu le-chameleon elinombala oqaqambileyo phantsi kwempembelelo yokukhanya okanye ubushushu. Le yimveliso yendabuko ecacileyo, nangona kunjalo iYuancheng iyenza ikhanye kuyilo olwahlukileyo.
Kwinqanaba lesi-3, u-Yuancheng ubonakalise intente ephuculweyo ephuculweyo esebenzisa ukuphefumla, ukukhanya kunye ne-UV enganyangekiyo kwilaphu elitsha, elikhaphukhaphu ngokomzimba kwaye lingcono ekusebenzeni. Ukongeza, u-Yuancheng wabamba ingxelo yentengiso ngokukhawuleza kunye nokuphucula amava abathengi ngokubanzi ngokwenza uhlengahlengiso kwifestile yentente.
Kunye neemveliso ezintsha ezisunguliweyo, u-Yuancheng wafumana ukuthandwa okuphezulu kule Canton Fair. Idokodo likaYuancheng belihlala lixinekile kwaye iimveliso ziye zamkelwa kakhulu, zitsalela abathengi abatsha nabadala ukuba beze kwingxoxo nonxibelelwano.
"Kwixa elizayo, sizakuqhubeka nokusebenza nzima kwaye siqhubeke nokutyala imali kwi-R & D, kwaye sizama ukuba ngumzi wehlabathi wezithuthi zangaphakathi nangaphandle kwezokhenketho kunye neemveliso zolonwabo.", Ngokuka-Xu Mengfei, umongameli we-Yuancheng.
12v Isikhenkcisi seMoto esiPholileyo, Imoto epholileyo yeWayini, IMako Car Cooler, Intente edumileyo yeMoto, Gquma Ngaphantsi Kwemoto, Kupholiswa imoto epholileyo 12v,